India: Ny “Fanonganam-panjakana” Izay Tsy Nisy Mihitsy · Global Voices teny Malagasy
India: Ny “Fanonganam-panjakana” Izay Tsy Nisy Mihitsy
Voadika ny 07 Avrily 2012 21:57 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, বাংলা, Nederlands, Español, English
Omaly (4, Aprily, 2012) lahatsoratra tao amin'ny gazety Indian Express nitatitra fa nisy ny fikasana hanongam-panjakana nataon’ ireo sampana tafika Indiana roa tonga tao Delhi tamin'ny alin'ny 16-17 Janoary, tsy nampandre ny governemanta akory izy ireo tamin'izany. Tsy nanome lanjany ilay lahatsoratra nivoaka tao amin'ny pejy voalohan'ny gazety Indian Express anefa ny rehetra tao amin'ny governemanta hatramin'ny olo-tsotra, niditra tamin'ny fanadihadiana izany ny mpisera tao amin'ny Twitter
Nifanontona tamin'ny daty nanaovan'ny Lehiben'ny Tafika V.K. Singh fitakiana teo amin'ny fitsarana faratampony momba ny daty nahaterahany ny fotoana nisian'izany hetsiky ny tafika izany. Etsy andaniny, nilaza ny tafika fa efa fahazarana ny manao fanazarantena amin'ny zava-manjavozavo.
Tafika lehilahy Indiana manandrana nandefa basy tafondro misy vavany roa nandritra ny fanaovana sarin'ady. Sary avy amin'i Sanjeev Syal. copy right Demotix (29/5/2011)
Harini Calamur nanoratra hoe:
Angamba mety mba te hanamarina ny tantaran'ilay tovolahy nikiaka mafy ilay tonian-dahatsoratra ao amin'ny gazety IE … na koa mety tratran'ny hosoka ny fandaharam-potoanan'izy ireo na mety nilaza tamin'izy ireo ny famatarandrony fa 1 Aprily androany. Angamba koa ny fitiavana te hahafantatra no tsy nandeha tamin'ny tokony izy….ary angamba nieritreritra izy ireo fa ny “scoop” dia tononina hoe “s’coup” [s'fanonganana]. Na angamba koa nihevitra izy fa ny fahazoany olona betsaka eo amin'ny fiarahamonina sy ny fampahalalam-baovao mahazatra dia hanjary tantara ho azy ireo ihany.
Sans Serif nilaza ny heviny hoe:
Hoy ny fomba fiteny taloha hoe aza mba mino izay tantaraina raha tsy efa nolavina amin'ny fomba ofisialy izany.
Mbola “scoop” ve ny tantara tao amin'ny Express izay manipy ho eo amin'ny mazava ny zavatra miafina sy tsy fantatra, fitsakotsakoana indray ny zavatra efa navoaka hovakiana; sa “fanodinan-dresaka” araka ny fanaon'i Delhi, entina hanoherana ny tsiambaratelo tafavoaka sy ny fifampihenjanana misy eo amin'ny lehiben'ny Tafika hivoaka sy ny “establishment” (rafitra tafapetraka)
Indreto fanehoan-kevitra tao amin'ny Tweet mikasika ny tantara:
@vinugeorge: Nikendry ny miaramila ny gazety Indian express, mahaliana ny tantara C**P’ (Fanonganana) . Shekhar Gupta dia olona fanta-daza tsara.
@atishmathur: Somary manoa loatra ny demokrasia ny ao India amin'izany mety hisian'ny fikasana hanongam-panjakana izany!!
@sprayrose: Shekhar Gupta nihevitra fa tsy mahazatra loatra ny firaisan-kevitra… ka noraisin'ny olona ho marina ny tantara fa andia-tafika roa no hanongam-panjakana ao India #Coup
@SmokeNLace: Ry Indiana ô! jereo kely ny lohahevitra malaza fa ahitana : Indian Express, Shekhar Gupta, zavatra mifandraika amin'ny Subhash…ahoana moa?
@anishparikh07: Very ny lazan'ny gazety Indian Express!! Mety hitsahatra tsy hamoaka vaovao intsony mihitsy izy!! #coup
@smrutiranjansa9: fanahiana mety isiana fanonganam-panjakana ataon'ny tafika indiana…miala tsiny ry glaoby…mifikitra lalina ao amin'ny tany Indiana ny demokrasia…nefa tsy avy tao India …..:)
@mahigupta: #Thingsnottodoinpublic (zavatra tsy tokony atao eo imasom-bahoaka) ny mamoaka tantara momba ny fanonganam-panjakana ataon'ny miaramila eo amin'ny pejy voalohany amin'ny gazetinao ao India..tsy mahafantatra akory ny fisainan'ny olona ankapobe.
@gauravsabnis: Yo India… mbola tezitra amin'ny Indian Express noho ny asa nataony, izany hoe, ny vaovao notateriny?
Nitin Pai ao amin'ny Acorn niezaka nanadihady ny hetsika tsy mahazatra nataon'ireo andia-miaramila anankiroa tao New Delhi:
Ireto manaraka ireto ny fanontaniana roa lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany. Voalohany, nahoana ireo sampana miaramila roa no nifindra mangingina amin'ny fomba tsy mahazatra? Faharoa, nahoana no nomen'ny governemanta alalana hivoaka ho an'ny rehetra ny vaovao, ary nahoana no androany?
Nilaza ny heviny ilay mpamahana bolongana fa navela hivoaka ny vaovao mba “hahafantaran’ ny vahoaka ny loza mitatao amin'ny demokrasia raha misy ny fanonganam-panjakana”.
Nandritra ny fanambarana, nanome ny fanazavany mikasika ny vaovao nalefany ny Indian Express.